Imisebenzi eDubai Yabafokazi - Layisha i-CV bese wengeza i-WhatsApp!
Dubai for kids - Ukuphila ukusebenza kanye nomzali e Dubai
Imisebenzi eDaily for Foreigners
Imisebenzi e-Dubay for Foreigners emhlabeni wonke. Ima ukufuna umsebenzi. Futhi uthathe amathuba ngokuqina kwethu. Ithimba lethu lochwepheshe bezobuchwepheshe. Ukusiza ukuthola indlela entsha yokuphila e-Emirates. Ikakhulukazi kubasebenzi abasha phesheya. Ngenxa Yomsebenzi e-Dubai. Yiba ngokoqobo kubantu bezinye izizwe. Ngalokhu engqondweni, sithatha ukhetho kusuka kuwo wonke umhlaba. Ithimba lethu ngalesi sizathu ngokuqinisekile lisikhuthaza ukuchitha isikhathi. Ukuthola umsebenzi emhlabeni jikelele. Kusukela saqala ukusebenza. Abafuna umsebenzi omusha bangakwazi ukulayisha a I-CV eya eqenjini lethu lokuqasha e-Emirates. Futhi ekuchazeni, abaningi babo bathola imisebenzi evela emazweni angaphandle.
Ngokuvamile, i-United Arab Emirates. Ingabe ukuphela okuyinhloko kwabafokazi. Ngoba leli lizwe lama-Arab lisendaweni Persian Gulf. Futhi unalokhu engqondweni, le ndawo ulungele amaNdiya futhi Abaphathi basePakistan. Ngasohlangothini oluhle lweDubai City ne-Abu Dhabi. Yiba ngukhiye isikhungo sebhizinisi e-UAE. Ngoba amasheya ayo asemngceleni no-Oman futhi I-Saudi Arabia. Futhi ubufakazi obuningi obucindezelayo bokuthi benza ibhizinisi elihle. Ikakhulu ezindaweni ezingomakhelwane. Ngaphezu kwalokho, ulimi olusemthethweni isi-Arabhu. Futhi kunjalo kuhle ukuqala ku-UAE. Kalula ngoba isinyathelo esilandelayo singaba I-Qatar neSaudi Arabia.
Kodwa ohlangothini olubi, kunezinto ezimbalwa okudingeka zilandelwe. Ngaphambi kokuba umuntu omusha ahlale e-Emirates. Ngokuvamile ithimba lethu lokuqasha abaphathi. Ubhale iziqondiso eziningi nezinsiza. Ikakhulukazi kubasebenzi abasha. Ukubasiza baqale ukufuna umsebenzi eDaily City. Ngoba ukuthola amathuba njengomuntu wangaphandle. Uhlangana kanzima ikakhulukazi e-United Arab Emirates.
Ukuze uthole umsebenzi omuhle sebenzisa amawebhusayithi okusesha umsebenzi
Sengisho nje, sebenzisa amawebhusayithi okusesha umsebenzi e-UAE. Ithimba lethu selivele libeke iziqondiso eziningana ezinhle. Ikakhulukazi entsha abafuduka ngaphandle. Kepha, iqembu lethu lisho amasayithi ambalwa ngezansi futhi. Ngasohlangothini olubi, a umuntu ojwayelekile akakwazi ukulindela okuningi. Ukubuyiselwa okuphakeme Kokuzungeze i-2.0% kuze kufike ku-3.0% nangezinga lokuphendula eliphansi kakhulu. Futhi ezimweni eziningi abantu izophendula kuwe. Mhlawumbe akuyena umuntu olindele. Noma ukunikezwa komsebenzi kungenzeka kube ngaphansi kokulindelekile. Qaphela othumele incwadi yakho yesicelo ne-CV. Ngoba kunezinkampani eziningi zokukhwabanisa emhlabeni jikelele.
Noma kunjalo, i-Dubai City Company ikukhuthaza ukuthi uzame. Bhalisa yakho imininingwane kumasayithi omsebenzi nezinsimbi zezisebenzi. Ngokuvamile, nikeza laba basebenzi umzamo owodwa. Ngoba awusoze wazi ukuthi yini ozoza nayo. Futhi kuphi ungase ufike eMpumalanga Ephakathi. Ngoba ikakhulukazi eDaily City. Ukuxhumana okulula okukhuluma okulodwa kungenza umsebenzi olula. Futhi ungaba i-expat entsha. Ngenxa yezinjini zokucwaninga zomsebenzi jikelele. Kuhle emisebenzini emisha nemisebenzi e Dubai ngenxa yabangaphandle namanje zivulekile. Kodwa, ukuhlukanisa umsebenzi wanezela kungakulethela umbono omusha.
Ungayithola kanjani umsebenzi njengomqambi wokuqala?
Thola okuningi mayelana namasayithi omsebenzi e-UAE
Mayelana neGulf Talent: Enye yezindawo ezinhle kakhulu eGulf. Ngokuvamile, kunamathuba amaningi emisebenzi. Nsuku zonke ibuyekeziwe izikhundla zeGulf Countries. Futhi umsebenzi oqeqeshiwe unikeza eQatar kanye ne-Abu Dhabi. Iningi labantu lathola Imisebenzi eDubai kubantu bakwamanye amazwe kule webhusayithi.
Mayelana neBayt: Inkampani ye-No.1 eMpumalanga Ephakathi. Ilinganiswe kakhulu kwabangaphandle. Futhi enye yamawebhusayithi aphezulu okuqashwa. Abantu kulo lonke Middle East naseNdiya kanye ne-International. Kuthunyelwa i-CV kubaphathi babo.
Mayelana ne-Edarabia Le nkampani ingenye yokukhula okusheshayo. Inkampani okuyinhloko okuhlosiwe ukufundisa abantu kanye nabangaphandle. Le nkampani ingenye yezindawo eziphezulu kakhulu ku-Google. Eqinisweni, ukuba nemisebenzi ethile. Ngakolunye uhlangothi, i inkampani inikeza iziqondiso ezimbalwa ezinhle zokufuna umsebenzi.
Mayelana ne-Dubizle yiwebhusayithi ehamba phambili ehlukanisiwe. Ikakhulukazi e-Dubai City. Ngakolunye uhlangothi, jAbafunayo ob basebenzisa ingxenye yabo ye-UAE yokufuna umsebenzi nge-visa. Inkampani iqale ukusebenza ku-2005. Kusukela lapho i-dubizzle.com isiye ethandwa kakhulu. Futhi inombolo ye Umsebenzi omusha uthunyelwe. Lokhu kusetshenziswe ipulatifomu ehlukanisiwe ngokujwayelekile. Ngokuqinisekile abafuna umsebenzi nabaqashi.
Mayelana ne-Monster Gulf: Kuwebhusayithi yomsebenzi we-monster. Ungasesha umsebenzi. Ngoba inkampani isibe khona isikhathi eside. Futhi kusukela ngaleso sikhathi i-monster enesikhundla esiphakeme. Futhi kuhle kakhulu abantu babhalisa nabo.
Mayelana ne-Glassdoor: inkampani, empeleni, iqala ukubeka amathuba. Ikakhulukazi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Futhi kusukela ngaleso sikhathi, izinkampani zingathola ukubuyekezwa. Kanye nokubeka izingxoxo. Ngaphezu kwalokho, abafuna umsebenzi bangafaka isicelo sokufunda ngemfundo ye-MBA.
Mayelana neJet Worker I-Careerjet iyinjini yokucinga ephezulu. Futhi iningi labantu liyakwazi ukusebenzisa ku-UAE. Kungakhathaliseki ukuthi yikuphi okuhlangenwe nakho kwabo. Ngakolunye uhlangothi, uhlelo oluhlelwe kwenza inqubo yokuthola umsebenzi ibe lula kakhulu. Futhi i-intanethi iba lula kakhulu kumsebenzisi. Lapho iwebhusayithi ye-Career jet iqala ukusebenza.
Mayelana ne-Dubai Careers I-Dubai Careers iyi-portal yomsebenzi. Ngaphezu kwalokho i-an indlela entsha yokufuna umsebenzi womthombo. Ngokuvamile, ithuthukiswa yiSmart Dubai Hulumende Wokusungulwa. Ngakho-ke, banokwethenjwa okuphezulu. Ngakolunye uhlangothi, le ngosi izothuthukisa indlela phezulu e-UAE.
Mayelana neRed: Lena enye yezinjini ezinkulu zokusesha zase-UK. Ngakolunye uhlangothi, unokuthunyelwa komsebenzi we-UAE. Ngalokhu engqondweni, abantu base-UK futhi Abafuna imisebenzi yomhlaba wonke. Ungafaka isicelo semisebenzi emisha yomsebenzi. Futhi, bathumela izinhlinzeko zemisebenzi ku-GBP. Ngakho kuwufanele ngempela ukubukeka.
Ngempela Bhizinisi ibhayisikobho yomsebenzi we-No.1. Futhi ibalwa ngaphezulu kwe-3 emhlabeni. Ngokuvamile, inkampani ikhula ngokubanzi. Ngaphezu kwezivakashi eziyizigidi ezingu-200 ezihlukile ku-2018. Futhi unezinkomba ezintsha ngenyanga.
Mayelana ne-Naukri, I-Dubai City Company ishilo le ndawo yomsebenzi. Ngoba uNaukri uye waqasha wonke umhlaba. Ngokwesibonelo, eNdiya, e-UAE naseQatar Leli sayithi ligcwele ukuthunyelwa komsebenzi kwabasebenzi basezweni elingaphandle. Kanye nokunikezwa okubuyekeziwe mayelana nomakethe wendawo.
Mayelana ne-Laimoon: Le ndawo ayisebenzi ethandwa umsebenzi we-UAE. Ngenxa yalokhu kuvuleka imisebenzi yokuqoqa imisebenzi evela kuwebhusayithi yezinkampani. ngokuqondile futhi uye nokuthunyelwa kwe-Qatar neSaudi Arabia.
Imisebenzi eDaily For Foreigners ingakufanele?
Kuningi kakhulu amathuba emisebenzi e-UAE. Ukusuka ekufundiseni isiNgisi kuya emsebenzini wezandla. Ukuqala endaweni ephansi kungaba inketho. Kuphela uma uyisikhulumi sendabuko sesi-Arabhu. Ngokuvamile, uma ungenalo ulwazi olwanele. ngaphandle ulimi lwesi-Arabhu eDubai. Kukhona ithuba eliphansi lokuqashwa. Zonke izingosi phezulu. Alungele ngempela emisebenzini eDaily for foreigners. Ngaphezu kwalokho, konke kuhle kakhulu.
Ohlangothini olubi, bonke banakho inani elikhulu lomsebenzi omusha. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, abantu abaningi bathumela okuqhubekayo. Futhi abafuna umsebenzi omusha bangaphatha uhlelo lwabo lokusebenza nsuku zonke. Ngokuqinisekile kusayithi ngalinye eliqashiwe. Ngasohlangothini oluhle, IDubai ikhula amashumishumi eminyaka. Futhi ulimi lwesiNgisi luphuma phambili e-Emirates. Unalokhu engqondweni, amathuba emisebenzi e-United Arab Emirates. Futhi, qala ukukhula emhlabeni jikelele. Ngemuva kwalokho, imisebenzi eDubai yabezinye izizwe ivulelwa kanzima. Izisebenzi ezintsha phesheya. Ungalindela ukuthola imisebenzi emihle. Futhi amazwe ahlukahlukene azungeze i-Gulf Area. Kungaba ikhaya elisha kubafokazi.
Imithetho yase-Dubai yabangaphandle ingcono yini?
I-Emirates ingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. Ngakolunye uhlangothi, uhlelo lwezomthetho lususelwa kumadili athile alukhuni. Isibonelo, ukuhunyushwa kwezintambo okuqinile komthetho weSazariya. Futhi noma ngabe kwenzekani, kumele kulandelwe. Okukodwa kwe Izibonelo izisebenzi zomhlaba wonke. Bavame ukuhlala e-Abu Dhabi noma e-Dubazini emsebenzini. Ukuqala impilo yabo njengomuntu wezizwe. Futhi ungahambisani nemithetho. Ngakho-ke, esikhathini esithile, umhlaba uhlala ejele ngamacala. Yingakho i-UAE izama ukufundisa abaseNtshonalanga. Okufanele ukwenze futhi ungenzi ku-UAE. Lokho nakanjani kubasize futhi bekungeke kubenze babe necala elilodwa.
Ehlangothini olungalungile, kwakukhona izibonelo zakamuva ku Idolobha lase-Dubai. Lezo zivakashi zakwamanye amazwe zaphula umthetho. Futhi zama ukuhambisana nabameli. Ngeshwa, i UAE umthetho uqinile kuwo wonke umuntu. Hlala ubandakanya ukubamba izandla esidlangalaleni. Ngaphezu kwalokho, ukuthumela indumiso ku-Facebook ngomusa. Ngaphezu kwalokho ukuphuza utshwala ngaphandle kwelayisense kuvinjelwe ngokuphelele emphakathini. Faka ezinye izindaba ezimbi, ngokwesibonelo, ukwabelana ngegumbi lehhotela nomuntu wobulili obuhlukile (ngaphandle komlingani wakho).
Ngaphezu kwalokho, iziphathimandla zaseDubai azilungile kwezinye izimo. The uhulumeni e-United Arab Emirates. Hlala ubheka izindlela ezimbalwa zokubuza. Akukaze kuvunyelwe ukwephula umthetho weSharjah uma kuziwa ukuziphatha okubi kwabangaphandle. Ngakolunye uhlangothi, kunezinto ezimbalwa ezihlukile kubantu bezizwe. Ngokwesibonelo, Izindawo zase Dubai nase-Abu Dhabi ungabuzi imibhangqwana ngamashayisense abo omshado.
Okujwayelekile kubahlali bendawo eDubai. Ngaphezu kwalokho, i-UAE inokudla okuhle kobusuku kuwo wonke umuntu. Lokho kungahle kube yisimanga impela kodwa imigoqo eminingi yezitabane nama-nightclub lapho East Europe Izifebe zithola amakhasimende amasha ngokukhululekile. Ingabe Ngokuvamile ivulelwe amazwe omhlaba wonke e-UAE.
Bheka amazwe ahlukene okufanele asebenze. Kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo endaweni yaseGulf!
Qatar, I-Saudi Arabia, UAE, Jordan
Ungaqala kanjani njengomunye wezizwe e-Qatar?
EQatar, kunezindlela eziningi zokuthola umsebenzi. Isibonelo, umbiko we-Amnesty International wathi izisebenzi zakwamanye amazwe banesibopho somsebenzi wokwakha idolobha elisha eQatar. Futhi okuhlose ukuqasha okuningi expats amaningi eQatar. Ngakolunye uhlangothi, indebe yomhlaba emidlalweni ye-2020 iyaxhashazwa futhi ibhekana nokuhlukumezeka okukhulu kwamalungelo abantu yize isithembiso sezinguquko zikahulumeni. Ngakolunye uhlangothi, kunezinto ezimbalwa okudingeka uzazi ngaphambi kokuthuthela eQatar.
Uma uzosebenzela inkampani engekho. Umbiko wezinkampani ezimbalwa uqophe inkampani yobunjiniyela enegama, iMercury IMENA, okushiye cishe abasebenzi be-80 abavela eNepal, India, kanye nePhilippines bema futhi bengakhokhelwa izinyanga eQatar. Ngakho-ke, kufanele uhlale ukhetha inkampani enhle ukusebenzela eMiddle East.
Kepha uHulumeni wakhokhisa izinkampani. Vele ngoba kwatholakala ukuthi basebenzisa isakhiwo seKafala esimele uhlelo lokuxhaswa kweQatar. Futhi lokho kwenza ukuthi abasebenzi banamathele kumqashi oyedwa ngokuhleleka ukuxhaphaza inqwaba yabasebenzi bakwamanye amazwe. ENepal, abantu be34 babike e-Amnesty ukuthi iMercury MENA ibakweleta isilinganiso samakhilogremu we-1,500, futhi uhlelo lweKafala lwalusetshenziselwa ukuwaxhaphaza. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi sizama ukukhuluma neqembu lethu noma okungenani ugweme izinkampani ezimbi.
Indlela yokufaka isicelo e-Qatar?
I-Qatar enhle kakhulu amasayithi emisebenzi ahlobene noHulumeni. Enye yezibonelo yile Indawo ephethwe ngumnyango. Zingenye yeziza ezinhle kakhulu ezaziwa ngemininingwane yama-visa ahamba phambili. Futhi ungakhetha uhlobo lwe-Visa ufuna ukuthola. Isibonelo, ungafaka isicelo se-visa yabafundi, i-visa yezivakashi, i-visa yomsebenzi. Ngokuvamile, kukhona Akunankinga yokuthola lolo lwazi kuGoogle. Umthombo ongcono kakhulu walokho uyinxusa lasendaweni. Ngakolunye uhlangothi, ungaya kummeli ezweni lakho. Bacishe babe nawo wonke ama-visa e-Qatar. Ngakho-ke, manje isikhathi sokuchaza amasayithi atholakala ofuna umsebenzis eQatar zibhalwe ngezansi.
Ukuthola imisebenzi e-Qatar njengomfokazi akulula neze, kepha uma kuqhathaniswa elinye eliphakathi - amazwe asempumalanga kepha kungenzeka. Imibhalo edingekayo okungenzeka ukuthi ifuna isicelo somsebenzi yinkulu impela. Kepha imiholo yabo icishe enye enhle kakhulu eMiddle East.
I-Saudi Arabia ne-Expats
Ungaqala kanjani njengezisebenzi zangaphandle e-Saudi Arabia?
Kulungile, ku I-Saudi Arabia, izisebenzi zakwamanye amazwe zazilinganiselwa ukuthi ziyi-15million njengase2019. The Ibhizinisi lamafutha kanye nethuba elisha litholakele kulelozwe amandla amakhulu. Futhi yingakho bekhuthaze ukufuduka kuma-1930s sekwephuzile. Njengamanje, banenketho enkulu yokuthuthuka kweSaudi Arabia. Ngakho-ke, baqasha abasebenzi bokufika. Noma abanye bephinde baqashwa kweminye imikhakha efana nezolimo, izimboni zezinsizakalo ezindlini kanye nokuhlanza. Njengoba abaphathi base-Saudi Arabia bephatha uthando ukuba nakho konke okusendaweni futhi okulungele ukuya ngasiphi isikhathi.
Njengasemazweni ajwayelekile amaSulumane. Ubuzwe babezinye izizwe bunquma isikhundla se- izisebenzi zakwamanye amazwe. Futhi ungamangala, ngokwesibonelo, izisebenzi ezivela eNdiya kanye namazwe asentshonalanga abethuthelwe eSaudi Arabia. Imvamisa baphethe izikhundla eziphakeme kakhulu ezingabanjwanga ngisho nabaphathi beSaudis. Futhi izikhundla eziphansi zibanjwe yi Ama-Afrika kanye nabase-Southeast Asians.
Izwe laseSaudi Arabia lalingomunye wabampofu kunabo bonke amazwe angenasisekelo emhlabeni kudala. Kepha ngaphambi kokutholwa kwamafutha yi-Texaco Amafutha (inkampani yaseMelika). Kungekudala ngemuva kokutholakala. Usizo lwangaphandle ubuchwepheshe kwakudingeka ukuxhaphaza imithombo emikhulu yamafutha etholakele.
Kube nokwanda okukhulu kwenani lezisebenzi zakwamanye amazwe eSaudi Arabia. Futhi ngenxa ye ukutholwa ikakhulukazi kusuka kwamanye amazwe ase-Middle East. Amaphrojekthi wokuThuthukisa kanye nezinhlelo zokwakhiwa kwengqalasizinda kukhuthaze ukungena kwabasebenzi abanamakhono kanye nabangenakhono. Futhi unalokhu engqondweni, iningi labasebenzi lalingamaPalestine. Bese-ke beqala ukuthola amaGibhithe, amaYemeni nabanye ezivela emazweni ase-Arabhu.
Ngakho, ingabe kukhona umsebenzi kimi eSaudi Arabia?
ISaudi Arabia yaziwa njengezwe elicebe kakhulu e-Arabhu kuze kube i-2023. Lokho ngokuqinisekile imininingwane enhle yama-expats. Banayo izinkampani eziningi ezitholakala eMiddle East. Inkampani yethu ihlala ikhona indawo yomsebenzi yabantu abafuna umsebenzi njengowakwamanye amazwe eSaudi Arabia. Ngasohlangothini olubi, eSaudi Arabia, izinqubo ze-visa nazo akulula kangako ukuzithola. Singasho enye yezinto eziqinisa futhi ezididayo kakhulu emhlabeni. Ikhethekile abokufika abavela eYurophu noma I-united states.
Iqembu lokuthengisa likaHulumeni waseSaudi alimakethi kwezokuvakasha ngenkuthalo. Abayona uhlobo lwabantu abamukelwa eDubai. Ngakho-ke, kubonakala kungenakwenzeka ukuthola i-visa yabavakashi esikhathini esingaphansi kwamasonto e-2. Kunomkhuba wokwenqaba ukungena eSaudi Arabia. Ikakhulu kubantu abanesitembu sakwa-Israyeli. Ngakho-ke uma uvela kuleli lizwe une-passport evuselelwe. Akunandaba noma wenzani, badinga amadokhumenti noma kunjalo. Kepha lokho kungenzeka kufunwe isicelo sakho somsebenzi. Ezimweni eziningi vele.
Elinye lamathiphu ahlakaniphe kakhulu okusebenza lapho. Ukuba namadokhumenti afana nesitifiketi sokuphumelela esiphezulu esikoleni. Okuzoba usizo kakhulu uma ubenze bangena elinye lamazwe amaSulumane. Isibonelo ikolishi noma inyuvesi, isitifiketi sezinhlamvu kanye nezinye izitifiketi ezihlobene. Kusuka eYunivesithi eQatar noma e-United Arab Emirates. Kepha ngasohlangothini oluqondile, ukuphela kwento ezokuthola umsebenzi uyi-CV yakho. Ngakho-ke, udinga ukwazi ukuthi kufanele ushaye kuphi nesicelo. Ngokwesibonelo, uma wenza ukumaketha ngendlela efanele. Abaqashi kungakuhle ukuthi basebenzisane nawe. Futhi isikhathi nomzamo oyosebenzisa ukwenza i-CV yakho iphelele. Ufuna ukushabalala nganoma yisiphi isikhathi.
I-United Arab Emirates ne-Expats
Ungaqala kanjani njengomunye wezizwe e-UAE?
E-UAE (United Arab Emirates), Uhulumeni wase-UAE ungowabafokazi. Futhi leli lizwe lijabule ukuthatha abasebenzi abasha abaqhamuka phesheya. Ngaphezu kwalokho, abafokazi abavela kuwo wonke umhlaba. Ingabe ngifuna ukuhamba lapho kusakhokhelwa intela. Ngaphezu kwalokho, imisebenzi ehlobene nohulumeni ibhekwa njengehamba phambili. Vele ngoba izizwe ze-UAE zikholelwa ukuthi kunehlazo ngaphakathi ukusebenzisana neminye imisebenzi yangasese. Iningi lamaArabhu endawo basebenza nenkontileka kahulumeni namaphrojekthi noma basebenza kwezempi. Inqubo yezwe esebenza ngama-visa kanye nemibhalo esemthethweni kulula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umphakathi, uma uqhathanisa namazwe angomakhelwane. Isibonelo, iSaudi Arabia neQatar ngcono kakhulu ngokuya ngenqubo yokufuduka.
I-UAE inezinto eziningi ezingahle zicabange. Futhi unalokhu engqondweni, abafokazi bomhlaba wonke abathuthela lapho. Omunye we abafuna imisebenzi esibandakanya bangabantu abavela ezizweni zasentshonalanga. Ngokuvamile, abakwa-Emiratis bambalwa kakhulu ezweni labo. Isibonelo, ngokwesilinganiso sesishiyagalolunye kuya kwesinye. Ngaphezu kwalokho, uhulumeni wase-UAE wamisa umthetho. Futhi lokho kusho ukuthi umfokazi ufanelekile ukufaka isicelo sokuba yisakhamuzi sase-UAE ngemuva kokuhlala ezweni isikhathi okungenani seminyaka eyi-30. Ngakho-ke, empeleni, kufanele ube lapho isikhathi eside. Ngaphambi kwakho ngisho thola ithuba lokuba yisakhamuzi sase-UAE.
Yini engiyidingayo ukuze ngithole umsebenzi ku-UAE?
Into yokugcina yimibhalo ye-UAE yokuthola umsebenzi. Isibonelo, isitifiketi esiphezulu se-UAE sokuphumelela esikoleni. Intando nakanjani akusize ukhuphule ibha yithuba elisha. Futhi uma unekolishi lamanye amazwe noma inyuvesi. Nakanjani sikusize ekwakheni imisebenzi ye-UAE. Ngakolunye uhlangothi, isitifiketi sezinhlamvu nezinye izitifiketi ezihlobene ezivela emithonjeni ehloniphekayo njenge-US noma i-UK is inzuzo emhlabeni wama-Arabhu. Kepha empeleni, okuwukuphela kwento ezokutholela umsebenzi yi-Resume yakho. Kwenza ukumaketha okuhlangenwe nakho kwakho, ngakho-ke, kungakuhle ukuthi usebenze ukuze wenze i-CV yakho iphelele. Futhi ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi awekho amaphutha. Kufanele kukhunjulwe lokho e-United Arab Emirates ungasebenzisa i-CV yesiNgisi.
Izwe laseJordani ne-Expats
Ungaqala kanjani njengomunye wezwe langaphandle eJordani?
Enye indawo eMiddle East yiJordani. Ngoba leli lizwe lifaka amarekhodi. Bangabantu abalungile futhi banayo ikhaya lababaleki abangaphezulu kwezigidi ezingama-2 basePalestine njengase2015. Ngakho-ke, abagcini ngokuqasha kuphela kodwa futhi basekela abanye. Cishe i-98% yabantu baseJordanian ingama-Arabhu. Ngaphezu kwalokho, ama-2% asele angabantu abancane bohlanga. I-International Labour Organisation eJordani. Kubekwe ku-TV naku-News ukuthi isimo sabasebenzi eJordani sinzima. Ngoba ukuba khona kwabasebenzi abaqeqeshiwe abasezingeni eliphansi ku-country. Isibonelo, izisebenzi zakwamanye amazwe embikweni onesihloko esithi "Imakethe Enzima Iba Yinselelo". Ngakho-ke, kufanele ulungiselelwe futhi sesha imisebenzi eminingi esebenza kahle. Abaphathi noma nabaphathi abakhulu.
Ngenxa yocwaningo olunzulu olwenziwe ngoSepthemba 2016. Yikuphi inhlangano kaHulumeni obekuhloswe futhi kuhlanganiswe jikelele. Abantu abaningi bafinyelele kumthelela wokuphana okuningana kweJordani ukubamba inani elikhulu lababaleki. Ngaphezu kwalokho, emakethe yezabasebenzi kuzwelonke, baye bathi abantu bakhona abasebenzayo. Umbiko ohlobene noHulumeni uhlose ukuphendula imibuzo yezisebenzi zakwamanye amazwe. Zokwenyuswa kanjani izinga lokuqashwa eJordani emakethe yezwe.
Ngakho, ingabe kukhona umsebenzi kimi eJordani?
Ngakolunye uhlangothi, bazama ukuthola ukuthi bangaqiniseka kanjani ukuthi indawo yokusebenza ihlala kahle kubo bonke abasebenzi. Hhayi kuphela ovela phesheya kodwa lwazo zonke izinhlobo zokuphuma nezabasebenzi bendawo. Futhi, ukuthi ungabandakanya kanjani ababaleki baseSyria ngaphandle kokususa abasebenzi baseJordanian. Futhi lowo kwakungumbuzo omkhulu owabuzwa amalungu aseYurophu. Ukuvula imakethe yabasebenzi kubabaleki bekusemkhankasweni wokuqinisekisa ukuthi kunakwa ukunakwa okuningana ekusebenzeni okuncane amazinga abasebenzi abasebenza kwamanye amazwe, kungakhathalekile ngesimo sabo. Ukuba nemvume yokusebenza eJordani, ukusebenza ngokuhambisana nomqashi wakho okokuqala idinga isicelo semisebenzi eJordani kutholakala kalula ngokusebenzisa amawebhusayithi kahulumeni.
Izwe lase-Kuwait ne-Expats
Ungaqala kanjani njengesinye sezisebenzi zakwamanye amazwe e-Kuwait?
EKuwait, kukhona ushintsho olukhulu eminyakeni edlule. Enye yezibonelo uhlelo lokuxhaswa kwabasebenzi bangaphandle. Iba semthethweni futhi emiphumeleni, abafokazi kufanele baxhaswe ngumqashi wendawo ukuze bathole imvume yokusebenza. Ngakho-ke, kukhona okuphelele lokho abantu abaningi bazama ukuthola ukuba ngumuntu ofuna umsebenzi ophumelelayos. Kukhona ushintsho olukhulu olwabakhona ngo-Agasti 2008, iLungu lePhalamende u-Abdullah Al-Roumi wathi bazolungisa umthetho wokuqeda uhlelo lokuxhaswa kwabasebenzi bakwamanye amazwe i-Kuwait kafeel. Ngakho-ke, bakuphatha lokho ngendlela eyiyo. Ngaphezu kwalokho, lolo shintsho lwaluwukusiza abokufika. Uhulumeni wayehlela ukuhlehlisa uhlelo lokuxhaswa ukuze kwakhe uhlelo olusha. Futhi bahlose ukuthi bekulungile ngoba lokho kuzovumela abokufika ukuthi badlulise izimvume zabo zokuhlala. Futhi kusukela lapho, uMnyango Wezindaba Zabasebenzi Nezabasebenzi uthatha amacala abo.
Ngasohlangothini olubi, njengomfokazi ngokwesibonelo waseSwitzerland. Ungathola umsebenzi eKuwait. Futhi lowo msebenzi ngokuqinisekile uzokhokhelwa kahle futhi isikhathi eside. Ngakho-ke kulokho, umsebenzi osuvele useKuwait ubopha ukunyakaza okuhle. Kepha ngaphambi kokuthi uqale umsebenzi, udinga i-visa yomsebenzi njenganoma yiliphi izwe lama-Arabhu. Imvume yokusebenza ne-visa yokusebenza yizinto ezahlukahlukene ngokuphelele, ukuze uvikele imvume yokusebenza, kufanele ukuthi usebenze nomqashi wakho isikhashana, futhi ngemuva kokuthola imvume yokusebenza, kunesidingo ukuthola i-visa yokungena emsebenzini kunoma yiliphi inxusa eliseduze.
Ngakho, ingabe kukhona umsebenzi kimi eKwait?
Izwe laseKuwait lingelinye lamawebhusayithi angasese ahamba phambili. Yazi imininingwane ye-visa engaphakathi. Lokho futhi kungakhathalekile ukuthi uluhlobo luni lwe-Visa olungalindelwa ngabangaphandle. Isibonelo, kungaba i-visa yabafundi noma i-visa yezivakashi, futhi kulokho, awukwazi ukuphatha ngempela. Ngakolunye uhlangothi, kuma-visa omsebenzi njll. Ngeqiniso, ngeke kube nenkinga yokuthola lolo lwazi ku-Bing noma kuGoogle. Iziza ezinhle kakhulu ezitholakala abafuna umsebenzi eKuwait zibhalwe ku-inthanethi. Ungabathola ukuthayipha Imisebenzi eKuwait yabezinye izizwe noma imisebenzi eKuwait.
I-Kuwait njengezwe inezikhala ezihamba phambili emikhakheni yezezimali. Ngakho-ke, ukuthola umsebenzi njengowakwamanye amazwe, kufanele ushaye imisebenzi yezezimali ekuqaleni. Ngakolunye uhlangothi, nini siqhathanisa nelinye eliphakathi - amazwe asempumalanga akulula ukuthola kodwa kungenzeka. I-Kuwait idinga amadokhumenti okungenzeka ukuthi afunwa isicelo somsebenzi kwinxusa laseKuwait.
Isiphetho sokuba i-Dubai njengesisebenzi sangaphandle
Imisebenzi e-Dubai For Abezizwe kuhle ukuhamba emhlabeni wonke. Futhi ngalokhu engqondweni, iningi labantu. Ikakhulukazi abaphathi, ngokuqinisekile babe nethuba elihle lomsebenzi. Ukuphela kokusebenza iphuzu yindlela yokuphila e-Dubai noma e-Abu Dhabi. Izivakashi ezintsha ze-Emirates. Kufanele uhambisane nemithetho eminingana. Ngakolunye uhlangothi, i-Dubai yamukela abaphathi bamazwe angaphandle. Esinye sezibonelo yi-Dubai Airports, amahhotela noma ibhizinisi lezimoto. Kuzo zonke lezi zindawo e-Dubai. Abantu abasha bangatholakala. Ukusuka kwabasebenzi basePakistan kuze kube yiziphathimandla zaseNdiya. Ngakho-ke, inkampani yethu iyala abasebenzi ngokugcwele emhlabeni wonke. Ngokuqinisekile, ukuvakashela i-Dubai City futhi qala ukusebenza ngaphandle.
Noma yiliphi izwe lenza lezi zingosi zitholakale kubafuna umsebenzi waphesheya ufisa ukuthola umsebenzi eMiddle East. Ngakho-ke siphinda sikukhumbuza ngalezi zingosi zomsebenzi.
Izingosi eziphezulu zomsebenzi nezingosi
I-Gulf Talent unomsebenzi omuhle wekhwalithi nemisebenzi
Imisebenzi e-Dubai inemisebenzi ethile ngokuqondile izindawo eDubai
Imisebenzi Abu Dhabi inokuthunyelwa komsebenzi ezindaweni ezithile e-Abu Dhabi
I-Dubizzle ihlukaniswa njengesayithi elikhulu le-Abu Dhabi
Glassdoor waziwa ukuthi unamathuba e-Abu Dhabi nase Dubai
Bayt kucatshangwa ukuba ngomunye wamawebhusayithi aphenya kakhulu umsebenzi eMiddle East.
I-Monster Gulf luhlobo lokusesha lomsebenzi we-monster olukhona kusukela ekuqaleni kwenkathi ye-intanethi.
Imisebenzi yeGulf imakethe ilungele imisebenzi yezinga eliphakeme.
IJet Career iyathandwa leyo inezinketho zokucinga zomsebenzi ze-UAE.
Ngempela yinguqulo yesiza somsebenzi yase-US ye-UAE.
Funda i-4 Enhle kubukeka sengathi imayelana nokufundisa imisebenzi kepha inemisebenzi kweminye imikhakha.
I-Laimoon isayithi eyaziwa ngokuvuleka kwemisebenzi ye-aggregation kusuka kumawebhusayithi enkampani ngokuqondile.
Ukufundisa isiNgisi eMpumalanga Ephakathi
Enye indlela ehlakaniphile, futhi ngicela ungakhohlwa ukuthi lokho kufundisa isiNgisi. Futhi inkampani yethu isikhumbuza njalo, ngalabo abangaba nentshisekelo yokufundisa, ukufundisa isiNgisi. Bangase nakanjani khetha inketho smart futhi elula. Vele, uma ukhuluma kahle isiNgisi Kukhuluma, noma ngokubhala. Ithimba lethu lokuqasha liyeluleka abafuna umsebenzi abasha ukuthi ubhekabheke kusayithi ngalinye ngalinye amathuba emisebenzi ukufundisa e-UAE bangazama amasayithi anjengokuthi;
Inani le-ESL isibonisi esimatasa kakhulu kulabo abanesifiso sokufundisa phesheya.
I-ESL yokudlela kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuvula amathuba emhlabeni jikelele.
Hlola isiza esihlanganisa imisebenzi emikhulu yokufundisa.
Iminyango Yokuqasha kutholakale ukuthi ungomunye wabaqashi abakhulu kakhulu be-ESL abatholakala.
Kulabo abanentshisekelo Imisebenzi Yezimali, nayi amanye ama-Overseas futhi Susa ama-Job Portals;
eFinancialCareers ingenye yezinjini zokusesha ezithandayo zemisebenzi yezimali ezitholakalayo kuwebhu kepha nakuba, ayitholakali kakhulu e-Qatar
Hamba kwelinye izwe kuye kwafunyanwa nokuba nemisebenzi emihle
Imisebenzi engaphezu kwe-Oversea kuyinto isayithi elitholakale okwesikhashana manje kodwa kubonakala sengathi kubonakala okuphawulekayo phakathi kokuthunyelwe kulawa masayithi nakwezinye izingosi.
LinkedIn iyisisetshenziswa esikhulu senethiwekhi yokwakha oxhumana nabo ensimini kanye nendawo yenzalo yakho
Kukhona namanye amawebhusayithi afana nalokhu;
The Guardian yaziwa ukuthi ingenye yamakhasi aphelele wezindleko ku-UAE
Telegraph unikeza iseluleko esihle sezimali sokulungiselela
I-Middle East, Ikakhulu i-UAE, ISaudi Arabia neQatar. Uhlala enikezwa umsebenzi omuhle kubantu bokufika emasimini amaningi, kunezinye izindawo eziphakathi nendawo ezisempumalanga. Simply ngoba bafuna ukuthuthukisa amaphrojekthi amaningi. Kepha ngasohlangothini olubi, kunezinqubo ezithile ezidingekayo kubasebenzi abakwamanye amazwe. Isibonelo, amadokhumenti angafunwa kunoma yisiphi isicelo somsebenzi yilezi:
Ikhadi le-Identity National
Ama-copy of parent identity card
Isithombe se-passport ye-24 yepaspoti
Ilayisensi Yokushayela (uma unayo)
Ulwazi lwe-Visa namaphepha
I-Akhawunti yaseBhange evela ezweni lakini
I-POI - Ubufakazi Bobunikazi (Isigaba esisodwa)
Futhi izitifiketi zokuqala ze-diploma (uma unayo)
Amakhophi e-2 enemibala yepasipoti
I-POA - Ubufakazi be-Adress
Ikhophi yesitifiketi semfundo yesikole
Izitifiketi zasekolishi ezingenakwenziwa
Futhi ezinye izinto ezimbalwa abangazicela
Ngakho-ke, njengoba ubona, amathuba akhona kuwe. Konke okudingeka ukwenze nje ube nesibindi esanele sokuqala impilo entsha phesheya. Kukhona abathengisi abangaphezu kwezigidi ezingama-3 abasebenza eMiddle East. Ungaba futhi omunye wabo. Futhi empeleni, udinga ukuba nohlelo oluhle lokusebenza. Ngaphezu kwalokho, zonke izinto zihlelwe ezweni lakini bese uqala ukusebenza phesheya. Inkampani yethu ilinde uhlelo lwakho lokusebenza njalo. Ngakho-ke, sicela ubhalise i-CV yakho nethimba lethu le-HR. Abaqashi bethu bazimisele ukukusiza ngokuqinisekile !.